Indlela yokwenza intliziyo ye-origami enezandla zakho: ividiyo, umzobo.
Sichaza indlela yokwenza intliziyo-origami ngezandla zakho
Iingcali ze-origami ziyimilingo: ngoncedo lwawo unokwenza nje izinto ezikhunjulwayo kunye neemathoyizi ezinkulu, kodwa kunye neebhokisi ezintle zokupaka izipho, kwaye ke, izipho ngokwazo. Makhe sizame ukwenza iinjongo ze-origami ezahlukileyo.
Origami intliziyo yamaphepha
Sika ixande emaphepheni amaphepha ukuze ubude buphindwe kabini ububanzi. Bend ishidi eliphindwe kane nge-diagonally njengoko kuboniswe kwisithombeni. Uya kufumana iifayile ezimbini kwi-X-shape.
Yongeza elinye icala lephepha kunye neleta X ngokubhekiselele kwiphondo ngokuchanekileyo kwimiqolo. Phinda uqhutywe ngaphesheya. Kwavela ezimbini ezintathu ezinkulu. Kufuneka uguqulwe kwicala eliboniswe kwisithombe.
Fumana isikhungo se-triangles, phinda inxalenye nganye ukuya phezulu. Vula i-valve nganye njengoko kuboniswe kwisithombe. Gcwalisa elinye icala lomfanekiso.
Flip kwikamva yekamva kunye nekona kwikota (oku kungenziwa kwisinyathelo esilandelayo). Emva koko uvule zonke iiphini eziphambi komfanekiso.
Vula kwaye udibanise iipasiti eziyi-8.
Intliziyo ye-Volumetric kwindlela yokwakhiwa kwe-origami evela kumaphepha ombala ikulungele - unokuyihobisa ibhokisi ngesipho!
Indlela yokwenza loo ntliziyo ye-origami ephepheni, jonga ividiyo
Iimpawu zokuqala zenhliziyo
iphepha lombala okanye nayiphi na enye
Ukusebenza uzakufuna iphepha elikwele iphepha. Gcwalisa isikwere kwisiqingatha, uze wenze enye iphambili phakathi.
Bend nganye iphiko ekubhekiselele kwinqanaba eliphambili njengoko kuboniswe kumzobo. Ukuguqula umlo uze uxoxe ngeenxa zonke. Ngakolunye uhlangothi, yenza ubophe ngqo malunga ne-1/3 yecandelo elishiyekileyo lephepha.
Gcwalisa iikona, udale intliziyo.
Inqaku elincinci lentliziyo yencwadi kwindlela yokwakhiwa kwe-origami ilungile.
Indlela yokwenza ibhukumaka-intliziyo ye-origami evela ephepheni, jonga ividiyo
Intliziyo ye-Modular inhliziyo
Intliziyo eqaqambileyo ye-origami evela kwiimodyuli isipho esihle kakhulu kumntu othandekayo okanye ngabazali. Lo msebenzi obunzima kunye nobunzima obuyinkimbinkimbi, ngoko ke ube nomonde, wenze izipho kule nkqubo.
iphepha elinemibala yeemodyuli zokuvelisa
ukubambelela ekulungiseni ukubunjwa
Ukuqala, kufuneka wenze iimodyuli ezininzi zee-triangular - esi sisiseko semisebenzi yezandla. Ibandla le modyuli iboniswe ngezantsi.
Uthembele ekuveleni iimodyuli kubantwana. Kubantwana, i-origami yinto enomdla. Xa iimodyuli zembala eyahlukileyo zilungele wena, ungaqala ukwenza intliziyo.
Isinyathelo sesibini silungiselela iimodyuli enye. Le yinkqubo ende, idinga ukuxhaswa kwamandla kunye nesandla somnwe kunye nomnwe. Ukwenza intliziyo yakho yokuqala yohlobo lwe-modami inokwenzeka, jonga umzobo wendibano kwividiyo
Indlela yokwenza imifanekiso engummangaliso ye-3D yentliziyo yokuhlobisa ibhokisi, jonga ividiyo
Njengoko ubona, i-origami yinkqubo yendalo yonke. Ngokunceda, unokwenza amanani ahlukeneyo, ukudweba nabantwana ukuba benze izipho zokuqala. Iimvulophu ezinjengeentliziyo, amabhukumaka, iibhokisi, izikhumbuzo, amakhadi-mfutshane, yonke into onokuyicingayo kulula ukuyisebenzisa ngeendlela zobomi.
IiVentent valentines ezenziwe ngezandla zabo ezenziwe ngamaphepha-makhonkco amaphepha kunye neefoto ngeyiteyithi kunye namavidiyo. Indlela yokwenza i-valentine ye-volumetric nabantwana ngo-Februwari 14
Imifanekiso ethandwa kwiSonto likaValentine ngoFebruwari 14, 2018
Imibongo yoSuku lukaValentine 2017 intombi ethandekayo, indoda kunye nendoda, intombi intombazana kunye nentombikazi - enhle, isiNgesi esifutshane kunye nehleko ngoFebruwari 14. Ndiyakuvuyela kwindinyana nomama kaValentine kunye nogogo
Izizathu zokusebenza kwezemfundo ezihluphekileyo
I-Vitamin isiselo kwi-raspberry kunye ne-lime
Ukunakekelwa kweLil, zokupheka kwabantu
UAnastasia Kostenko ugqoke izinto ze-Olga Buzovoy, ifoto
Iingcali zeengqondo kunye neengqondo - into efanayo?
IHososope yowesifazane waseKhansela ngoJulayi 2017
I-sachet ene-aromatic kunye neerbs
UXenia Borodina wathetha ngokukhulelwa kwakhe okwesibini
Ukwahlula njani ukuhamba kwimihla yokuphuma kwegazi emva kokubeleka?
Isaladi eluhlaza kunye neetamatato kunye ne-avocado
Ukutshata emva komtshato
Isipho kumama ngezandla zam: i-craftworks-iintyatyambo ezenziwe ngeboya yekotoni